Taleb Rifai kelere Carlos Vogeler maka ịgba ume mgbanwe ndị ndu na UNWTO
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Taleb Rifai kelere Carlos Vogeler maka ịgba ume mgbanwe ndị ndu na UNWTO
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Uche WTN maka Mgbasa Ozi UNWTO na-aga n'ihu na naanị 24 n'ime mba 35 na-aza. Ọ dịka ụwa nke njem karịrị akarị. Nke a bụ ohere maka SG Zurab Pololikashvili iji mepụta usoro a.
Taa ka Dr. Taleb Rifai kwuru eTurboNews, ọ na-akwado Carlos Vogeler in niile 21 ihe depụtara site n'aka onye isi UNWTO Executive Director iji dochie odeakwụkwọ ukwu UNWTO ugbu a Zurab Pololikashvili.
Dr. Taleb Rifai rụrụ ọrụ dịka onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO maka okwu abụọ.
Louis D 'Amore, onye guzobere ya, na onye isi oche nke mmba ofesi maka Udo site na njegharị kelere Mazi Vogeler maka ezigbo nyocha ya.
Ọ malitere site na emeghe leta banyere na Disemba 11, 2020 nke Dr. Taleb Rifai na onye odeakwụkwọ ukwu mbụ Francesco Frangialli na-achọ nzukọ na-abịa n'ihu nke Executive Council of UNWTO na Jenụwarị 18, 2021 ga-eyigharịrị.
Planningkwado nzukọ na Madrid ebe ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya 35 na-anọchite anya ndị isi Council Council bụ naanị nhọrọ bụ adịghị mma na ijere onwe onye ozi nke Zurab. O doro anya na SG dị ugbu a mepụtara ya iji hụ na ọ ga-emeri ntuli aka 2022 nke emere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ tupu mgbe ahụ naanị izu 2 n'oge mkpọchi n'ihi COVID-19
The Network Njem Nleta Ụwa akpọ maka Nhọrọ na UNWTO Election ma na-anwa ịdọta uche nke ndị na-ahụ maka njem nleta na ndị isi obodo iri atọ na ise.
A na-ekesa akwụkwọ mkpesa ahụ tupu ekeresimesi site na email, faksị na ụfọdụ ndị ozi. E zigakwara ya na ndị nnọchi anya obodo Washington DC niile, ebe World Tourism Network dị na United States.
Ndị ozi 24 azaghị ozi email, faksị, na oku ekwentị. United Nations na New York anaghị enye email ziri ezi ma ọ bụ nọmba faksị maka Secretary General. Emechiri ụlọ ahụ n'ihi COVID-19.
Ndi otu UNWTO 35 nyefere UNWTO nyefere mba ha ka ha nọchite anya ha dịka ndị otu Executive Council. E nyefere mba 159 ka ha votu maka Secretary General.
Maka oge nke abụọ usoro ntuli aka a jupụtara na esemokwu, nrụrụ aka na mmebi iwu.
Mmadụ iri abụọ na anọ n’ime mmadụ iri atọ na ise azaghị ma ọ bụ kweta na ha natara mkpebi WTN na arịrịọ UNWTO. Mgbe emere njem nleta na ikpere ya, ọ bụ ihe ijuanya na ọbụlagodi mba ndị dị ka France, Greece, India, ma ọ bụ Spain na-eleghara ụdị nkwukọrịta a anya. Iza ajụjụ na ụlọ ọrụ gọọmentị dị ka nke pere mpe ma ọ bụ na anaghị achịkwa ya.
Ndị otu UNWTO Executive Council nọ na-agbachi nkịtị ruo ugbu a:
pịa ebe a ka ị gaa n'ihu ịgụ